देउखुरीको समृद्धिका लागि मेरो उम्मेदवारी–मेटमणि चौधरी – ।।दाङ खबर।।
Home / ब्लग/विचार / देउखुरीको समृद्धिका लागि मेरो उम्मेदवारी–मेटमणि चौधरी
देउखुरीको समृद्धिका लागि मेरो उम्मेदवारी–मेटमणि चौधरी
२०७४, १७ मंसिर आईतवार ०७:०३	ब्लग/विचार, मुख्य समाचार
संयुक्त बाम गठबन्धनका प्रतिनिधि सभा उम्मेदवार दाङ क्षेत्रनम्वर १,
चुनावी प्रचार कसरी अघि वढाउनु भएको छ ?
वुलेट रेलको स्पिड जस्तो हुन्छ त्यसरी तिव्र गतीमा चुनावी प्रचार अघि वढेको छ । मतदाताको घरदैलोमा पुगीरहेका छौं । संयुक्त वामगठवन्धनको तर्फवाट टोल वस्तीमा आयोजना गरिएका जनभेलाहरुमा पुगेर मतदाताहरुको माझमा आफ्ना एजेण्डाहरु, वाम गठवन्धनको आवश्यकता र चुनाव जितेपछी सम्पादन गर्ने कामको वारेमा वताउने काम भैरहेको छ ।
चुनाव प्रचार लिएर गाउँ पुगीरहेको कुरा वताउनु भयो । निर्वाचनले जनतालाई कत्तिको छोएको छ ?
निर्वाचनलाई लिएर मतदाताहरु उत्साहीत भएको पाएको छु । अहीले सम्म जिताएर पठाएका उम्मेदवारहरुले जनताको पक्षमा देखीनेगरी, महशुसहुनेगरी काम नगरेको स्वयम मतदाताहरुले अनुभव गर्नु भएको छ । मतदाताहरुले काम गर्न सक्ने योग्य, क्षमतावान उम्मेदवारको खोजीगरीरहेको मैले पाएको छु । हामी जहाँ पुग्छौं त्यहाँका मतादाताहरुको अपार मायाँ लिएर फर्कीएका छौं । मंसिर २१ गतेको निर्वाचनमा मतदान गरी बीजय उत्सहवमा सहभागी हुन मतादाताहरु आतुर रहेको मैले पाएको छु ।
तपाई चाँही कत्तिको उत्साहीत हुनुहुन्छ ?
म उत्साहीत नकुने कुरै भएन् । जनतामा जस्तै म उम्मेदवारमा पनि उत्तिकै उत्साह छाएको छ । जनताको सेवक भएर काम गर्ने अवसर पाउनेमा ढुक्क छु । राजनीतीमा लागेको लामो समय भयो । अहीले जनताको मतको आधारमा परिक्षणको घडीमा उभिएको छु । राजनितिमा लाग्ने जो कोही पनि जनता माझ पुगेर अनुमोदीत हुन चाहन्छ । अहीलेनै हामी काङ्ग्रेस भन्दा २२ हजार भोटले हामी अघि छौं । चुनाव जीत्ने, निश्चीत, कन्फीडेन्ट भएपछी उत्साहीत नहुने कुरै भएन् । हामी एकखालको प्रागीक ब्यक्तित्व निर्वाचनको दौडमा छौं ।
गाउँ पस्दा मतदाताहरुले के भन्नुहुन्छ ?
गाउँमा मलाई के भन्दैछन् भने तपाई फ्रेस क्याण्डीडेट । तपाई राजनितिमा लामो समय देखी लागेको ब्यक्तित्व, यती मात्र होईन कमिटि, पार्टिको महत्वपूर्ण कमिटिमा वसेर कुशलतापूर्वक काम गरेको भनेर खुसी ब्यक्त गर्दै अविर लगाउन पाउँ भन्ने शुभकामना ब्यक्त गरीरहनु भएको छ । यसका साथै निर्वाचन जीतेर गाउँका समस्याहरुको समाधान गर्नतर्फ ध्यान दिनुपर्ने, विकास निर्माणका कुराहरुमा ध्यानाकर्षण गराईरहनु भएको छ । जीतेपछी नविर्सनुहोला भनेर आफ्ना कुराहरु राख्नु भएको छ । बीजयको आर्षिवाद दिईरहनु भएको छ ।
तपाई प्रति जनतामा यतीधेरै विश्वास कसरी जाग्यो ?
नाई यस्तो हो म फुत्त एक दिनमै राजनीतीमा आएको मान्छे होईन् । मैले अहीले ४२ वर्ष पार गर्दैछु । र मेरो राजनैतिक जीवन कम्यूनिष्ट पार्टिमा २९ वर्ष विताईसकेको रहेछु । बाजेले पनि कम्यूनिष्ट पार्टिकै राजनिति गर्नु भयो । बुवाले पनि कम्यूनिष्ट पार्टीकै राजनिति गर्नु भयो । म पनि त्यही कम्यूनिष्ट पार्टिकै राजनितिमा छु । यो कुरालाई जनताले नजिक वाट हेर्नेरहेछन् । त्यसपछी पटक पटक जेल गएँ । पुलीसको कुटाई पनि खाएँ । धेरै राजनैतिक आन्दोलन भए । त्यसमा मेरो भुमिका देखे । मेरो विचारहरु सुने । यो मान्छेले केही गर्छ भन्ने विश्वास जनतामा जागेको छ र निस्कर्षमा पुगेका छन् ।
वामगठवन्धनले जनमानसमा कस्तो प्रभाव परेको छ ?
तपाईले यत्ती वुझनुस । नेताहरुको उम्मेदवारी खोस्सीएको होला, त्यसकारणले नेताहरु अली अली दुखीभएको होलान । तर, जनता यती शिरियस रहेछन् । कम्यूनिष्ट पार्टि मिलेकोमा कि त माथीका नेता खुसी होलान कि त जनता खुसी छन् । जनता नेता भन्दा हजार गुणा खुसी छन् । त्यस कारणले माथीका नेता, कार्यकर्ता भन्दा त्यो भन्दा धेरै खुसी ग्रासलेवलका कमैया, कमलरी जो साचो अर्थमा कम्यूनिष्ट पार्टिको सासन ब्यवस्था देख्न चाहन्छन् । हेर्न चाहन्छ, स्थापीत गर्न चाहन्छ । त्यो वर्ग धेरै खुसी छ । जनतामा निकै उत्साह छ । यीनीहरु अव चुनाव जित्ने भए । हामीलाई सुःख र समृद्धि पनि दिने भए, विकास पनि गर्ने भए भनेर त्यस्ताृे एकदमै भित्रै देखी विश्वास पलाएको मैले पाएको छु ।
चुनावी एजेण्डा के छन् ?
मेरो पहीलो काम, म पाँच वर्ष भित्र दाङ निर्वाचन क्षेत्र नं. १ भित्र कुनैपनि घरमा खरको छाना तपाई देख्नुहुने छैन् । यो मेरो आफ्नो पिडा पनि हो । साउन, भदौ महीना आयो भने पानी चुहीने, बैशाख आयो भने घरमा आगो लाग्ने । झन गरिव माथी झन गरिवी थप्ने । जुन अहीले सम्मको नेपाली समाजको कल्चर गरिवहरु दुःख पाउदैछन् । त्यो वाट म मुक्ती दिलाउछु । मेरो पहीलो कामको सुरुवाती यही वाट गर्छु । त्यसपछी अर्काे समस्या भनेको गरिव घरका छोरी, वुहारी सुत्केरी हुदा निकै समस्याग्रस्त हुन्छन् । पौष्टिक आहार खान नपाएर रोगी हुन्छन्, कुपोषीत हुन्छन् । तिनका बच्चालाई खुवाउने प्रसस्त मात्रामा दुध आउदैन् । दुध नआएपछी बच्चाले दुध खान पाउदैन् । दुध खान नपाउदा बच्चा पनि कुपोषीत हुन्छ, समाजै रोगी हुन्छ । त्यो वाट मुक्ती दिलाउनको लागी प्रत्येक सुत्केरीलाई अहीले हजार पाउदैछन्, हाम्रो गठवन्धनको सरकारले थप पाँच हजार वनाउदै छ । म त्यसमा दश हजार रुपैयाँ थपेर कम्तिमा १५÷१६ हजार रुपैयाँ प्राप्त गर्ने र महिना दिन सम्म प्रसस्त मात्रामा फलफुलहरु, माछा मासुहरु, पौष्टिक आहारहरु खान पाउने, त्यो खालका ब्यवस्थान, प्राब्धानहरुको ब्यवस्था गर्ने छु । र समाजलाई एउटा स्वस्थ समाज, तन्दुरुस्त समाज, मान्छेहरु पनि हेर्दा खेरी खाईलाग्दा, लोभालाग्दा मानिसहरुको समाज निर्माण गर्ने छु । अनि गुठी, विश्व विद्यालयको जमिन छ अनि मठ मन्दिरको जमिन छ ।
यी सवै खालका मन्दिरको नाममा किसानहरु माथी शोषण गर्ने, विश्व विद्यालयको नाममा किसानमाथी शोषण गर्ने, देवी देवताको नाममा किसान माथी शोषण गर्ने जुन नेपाली समाजको कल्चर वनेको छ । यस वाट समेत म सवै किसानलाई आफ्नो श्रमको आफै मुल्य प्राप्तहुनेगरी, सवै जमिनलाई रै करमा परिणत हुनेगरी काम गर्ने मेरो यो तेस्रो संकल्प छ । र म सुरुवात पनि गर्छु । अनि यो क्षेत्रलाई शैक्षिक हवको रुपमा विकास गर्ने अर्काे संकल्प हो । जस्तो साविक गोवरडिहालाई आईएसीएजी, विएसीएजी अनि एमएसीएजी सम्मको अध्ययन अध्यापन गराउने । त्यसको लागी म शिक्षा क्षेत्रमा कामको सुरुवात गर्ने छु । गढवा वेल्टलाई टोललै चार पाँच वटा विषयमा प्राविधिक शिक्षालय, साना, साना मसीना, मसीना, जो आठ कक्षा पास गरेको छैन् । उनलाई समेत प्राविधिक शिक्षालय मार्फत रोजगारमा संलग्न गराउने मेरो त्यो संकल्प छ । पश्चिम जहाँ राजपुर छ त्यहाँ प्लस टु सञ्चालन गर्ने । विए लेवलको पढाई सञ्चालन गर्न ग्यारेन्टी गर्ने । अनि यता अमेलीया क्षेत्रमा थोरै प्राविधिक शिक्षालय र विए लेवलको कलेज चलाउने ।
त्यसपछी लमहीलाई बहुमुखी धेरै बहुमुखी जुन विषयको धेरै पढाई भएको छैन् । एमए लेवको पढाई सुरु भएको छ तर, बहुमुखी हुन सकेको छैन् । आवश्यकताको आधारमा थप फ्याकेल्टीहरु थप गर्ने र लालमटीया क्षेत्रलाई पनि यही तरिकाको शैक्षिक मोडेलको विकास गर्ने । त्यो मेरो आफ्नो अभिप्रया छ । निकै महत्वपूर्ण कुरा राप्ती नदी अहीले सम्म अभिसाप भएको छ । जनताहरुको लागी राप्ती नदी वरदान सावित गर्ने छु । राप्ती नदीलाई साउन, भदौ महनिाको पानीलाई धान्न सक्ने राप्ती नदीको पेट गराएर, त्यसलाई फराकिलो वनाएर दुवै साईडमा पक्कि तटवन्धन्, नदी साघुरो भएपछी एक किलो, दुई किलोमिटरको फरकमा पुलहरुको निर्माण गर्ने, दुवै साईडमा पक्कि नाला निकाल्ने र दक्षिणमा राजपुर सम्म पु¥याउने, उत्तरमा अमेलीया सम्म पु¥याउने, अझ साईड साईडमा सुन्दर वगैचाको निर्माण गर्ने । त्यो सुन्दर वगैचालाई अवलोकन गर्नको लागी टाढा टाढावाट आउने वातावरण वनाउने र त्यो ठाउँलाई टुरिस्ट एरीयाको रुपमा विकास गर्ने र साईड साईडमा ठुला शहरहरुको विकास गर्ने लक्ष्य छ । राप्ती नदी भित्र ¥याफ्टीङ्गको कुरा छ, वोटीङ्गको कुरा छ । म यस्तो गर्ने छु भालुवाङ्ग देखी स्टेसन सुरु गराएर ठाउँ ठाउँमा ओर्लदै आनन्द गर्दै सिक्टा सम्म पुग्ने र राप्ती नदीलाई संसार भरीका वोटीङ्ग प्रेमीहरु छन् । ति सवैलाई आउन मिल्ने, आनन्द महसुस गर्न मिल्ने खुसी हुनेगरी ¥याफ्टीङ्ग र वोटीङ्गको ब्यवस्थापन गर्ने छु । पाँच वर्ष यी सवै काम गर्ने छु । राप्ती नदीको तटवन्धको कुरा चुनाव जित्ने वित्तीकै यसलाई तटवन्ध गरिने छ । दोस्रो वर्षमा बजेट पार्ने कुरा हुन्छ, तेस्रो वर्ष देखी कामको कामको सुरुवात गर्ने छु । र दश वर्ष भित्र सिक्टा सम्मको दुवै साईडमा तटवन्ध निकाल्ने कुरा, पक्कि नहर निकाल्ने कुरा र सवै किसानहरुको जग्गालाई सिन्चीत गर्ने कुरा र सिन्चीत गरेर उत्पादन वढाउने कुरा, त्यो उत्पादनले जनताको जीवन समृद्धि ल्याउने कुरा समेत मेरो आफ्नो महत्वपूर्ण संकल्प छ ।
निकै मत्वकांक्षी योजनाहरु अघि सार्नु भएको छ । यी योजनालाई कार्यान्वयन गर्ने आधार चाँही के हो ?
मान्छेमा ईच्छा शक्ति हुनुपर्छ, सवै काम पुरा हुन्छ । सुत्केरीहरुको लागी म एक करोड बजेट सुत्केरी राहत कोषमा सुरुमा बजेटका ब्यवस्था गर्ने छु । त्यसको लागी दातृ निकाय छ । नेपाल सरकारको थुप्रै सहयोगी निकायहरु छन् । त्यसपछी यी दुवै वाट भएन भने मेरो आफ्नो सांसद विकास कोषको रकम वाट बजेट ब्यवस्था गर्छु । टिनको छानो के गाह्रो छ । एक करोड रुपैयाँ कोषको ब्यवस्था गरियो भने सुरु हुन्छ । अर्काे महत्वपूर्ण कुरा सुनाउन चाहन्छु मेरो आफ्नो क्षमताले राप्ती नदीको विषयमा दातृ निकायहरु वाट म आफैले, नेपाल सरकारको तर्फ वाट गर्ने कुरा त भैहाल्यो तर, प्लस थप कार्यहरु मेरो योग्यता, क्षमता हैसीएत, समन्वय क्षमताको कारणले दातृ निकायहरु संग सहयोग मागेर राप्ती नदीमा तटवन्ध गर्ने कुरा, दुवै साईडमा कुला निकाल्ने कुरा, त्यस वरीपरी सुन्दर वगैचाहरु निनर्माण गर्ने कुरामा यहीका जनताहरुलाई सहभागी गराएर यी सवै काम सम्पन्न हुन्छ ।
अन्तमा केही छुटेका कुराहरु छन् की ?
म काम गर्न सक्छु । म यो देशको मुहार फेर्न सक्छु । यो निर्वाचन क्षेत्र नं. १ भित्रका जनताहरुको जीवनमा समृद्धि, सुख, हाँसो पनि ल्याउन सक्छु । सवै युवाहरुलाई रोजगारमा सहभागी गराउन सक्छु । र सवैलाई सम्वोधन गर्न सक्ने ब्यक्ति भएको कारणले सवैले एक पटक सूर्य चिन्हमा भोट हालेर मलाई बीजय गराउनु भयो भने जनताहरुले नसोचेका काम म वाट सम्पन्न हुन्छ । त्यसैले आशा विश्वास दिलाउन चाहन्छु । तपाईहरुले भोट हालेको ठाउँ सूर्य चिन्ह र म चुनाव जीतेपछी भोट हालेका सवैलाई गौरव गर्ने खुसी लाग्ने खालका कामहरु सम्पन्न गर्ने छु । यस मानेमा अन्त्यमा भन्न चाहन्छु, सूर्य चिन्हमा भोट हालेर मलाई बिजय गराउने र यो विजयको महाअभियानमा सरिक हुन सवैलाई आग्रह गर्छु । धन्यवाद ।
२०७४, १७ मंसिर आईतवार ०७:०३
Previous यसरी सुनिश्चित हुँदैछ इन्द्रजितको जीत
Next आज – १७ मंसिर २०७४ आइतवारको राशिफल